“ အဖြေမရှိတဲ့ ပဟေဠိများနဲ့နိုင်ငံ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ အဖြေမရှိတဲ့ ပဟေဠိများနဲ့နိုင်ငံ “	15
“ အဖြေမရှိတဲ့ ပဟေဠိများနဲ့နိုင်ငံ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 30, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary | 15 comments
တောင်တွေးမြောက်တွေး အပိုင်းအစလေးများ (၁၀)
စိတ်ကြွဆေးပြားကားတစ်စီးတိုက် ပိုင်ရှင်မဲ့ တွေ့ရပြန်သတဲ့။
တိုင်းပြည်ကို တရား မ၀င်ခိုးဝင်
(ဒီအလုပ်တွေက လဲ အတွင်းလူမပါဘဲလုပ်လို့မရ)
ချလိုက်တော့ ဒီတစ်ခါတော့ တကယ်လုပ်ပဟလို့တွေးနေလို့မှမဆုံးသေးဘူး
ဘာတာဝန်မှန်းမသိ ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ “တာဝန်”တံဆိပ်တတ်ထားသူတွေ့ရဲ
နာမယ်တပ်ပြီး ကလော်ဆဲနေပေမယ့်လဲ တကယ်မကြိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့လား
တဖွဖွ တသသ နဲ့ ချီးမွမ်းခန်းတွေဖွင့်နေပေမယ့်လဲ စိတ်ထဲက တကယ်ကြည်ညိုတာဟုတ်ပါ့မလား
လွပ်လပ်ခွင့်ပေးပါ တစာစောအော်နေကြတဲ့မီဒီယာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကရော
ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ တသီကြီးကို မေးကြည့်မိတော့
အားလုံးက ပဟေဠိဆန်ဆန် အဖြစ်အပျက်တွေချည်းဘဲမို့
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီပိုစ်တင်အပြီးမှာ Points: 100100 Kyats ဖြစ်သွားပါပြီး
မြစပဲရိုး says: Many Congratulations ပါ ကိုပေါက်ကြီး။
ဒီလို ပန်းဝင်နိုင်ဖို့ တကယ်တမ်း သိပ်မလွယ်တာ ကိုယ်တွေ့မို့ ပိုပြီး ဂုဏ်ယူပေးပါတယ်။ :-))
အားလုံးကတော့ ခေါင်မလုံလို့ဘဲ ဆိုချင်ပါတယ်။
. ရွှေပြည်ကြီးထဲ ဒီလူကြီး တွေ ဘာကြောင့် တောင် ဒီလောက် မောဟဖုံး ပြီး ကိလေသာမီး လောင် နေကြတယ် ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ ကို မရနိုင်ဘူး။
ငယ်တုန်း ထက်တုန်းမို့ အာရုံ ကို အမှောင်လွှမ်းတာ နားလည်နိုင်သေးတယ်။
အခုဟာ က တကဲ့ ကို တရားလက်လွတ် ကို ဖြစ်နေတော့တာ။
မနေ့က ဆရာတော် တရားခေါင်းစဉ်ကို ယူသုမ်းရရင် သူတို့ စိတ်တွေထဲ ဘယ်လောက်တောင် အဆိပ်ဖြစ်နေကြလဲ မှန်းနိုင်တယ်။
. ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြောရမလား။ သနားဖို့ကောင်းတယ် ပြောရမလားတောင် မသိတော့ပါဘူး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျေးဇူးပါ ကိုလတ်ကြီးရေ
မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ ကိုလတ်လဲ မှတ်တမ်းတစ်ခု တင်နိုင်တော့မှာပါ။
မနေ့က မိတ်ဆွေတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖြစ်တော့ တစ်ယောက်က ပြောသွားတာကတော့ အမှတ်တရပါဘဲ
တိုင်းပြည်ကို ပြပြီး လုပ်စားသူနဲ့ လုပ်စားတာခံရသူ ပါတဲ့
kai says: ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးနီးလာရင် နိုင်ငံတိုင်း(တိုင်း) အဲလိုပါပဲ..။
အာဏာရပါတီ/လူရယ်..။ အာဏာမရသေးတဲ့ပါတီ/လူရယ်… ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလုပ်ကြ..ဖြစ်ကြတာပေါ့..။
လူကို” ဖျောင်”တာတွေ…မလာသေးသမျှ.. မဆိုးသေးဘူးဆိုရမှာပါပဲ..။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခိုင်ပြောမှ ဖျောင်ဘို့ သတိတွေ ရ ကုန်တော့မှာပါဘဲ
kai says: လူဖျောင်.. လူသတ်.. တောခိုသူပုန်ထတွေမဖြစ်ခဲ့ရင်.. အခုသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့.. သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုအဖြစ်.. ခရက်ဒစ်ပေးရလိမ့်မယ်..။
ဒီမိုး..ဒီလေ..ဒီလူများနဲ့တော့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 672
YE YINT HLAING says: ဘေးမဲ့ပွဲတော်ကြီးမှာ အဲဒီလို ဆဲဆို နေတာတွေ ကိုစီစစ် အရေးယူ မဲ့အကြောင်း ဦးစိုးသိမ်း ပြောတာတော့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အရင်က အီးမေးလ် အကောင့်တစ်ခုရှိရင်တောင် အထဲဖမ်းထည့် ခံရတာတွေရှိတယ်
အခုတော့ ဖေစ်ဘုတ်မှာ ဆဲချင်တိုင်းဆဲနေတာကို မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရုံမက
ဒီတော့ ဒါဟာ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ိမိပါတယ်
ဟေသီ says: မင်းအုပ်စိုး အမှုနှင့် ပတ်သက်လျှင်တော့ ဥပဒေသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြည့်လျှင် များလွန်းတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဒေါသအလျောက်သတ်တယ်။ ကိုယ်တိုင် ရဲစခန်းကို ဝန်ခံတယ်။ ဒါက လျှော့ပေါ့လို့ ရတာပဲ။ ဒီတစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှုက ထောင်ပိုင်တွေ ကောင်းစားရေးနဲ့ လူထု ပါးစပ်ပိတ်ရေး အတွက် ချပေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်လုိ့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
အောင် မိုးသူ says: အဲ့သည်နိုင်ငံ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မ ဟေသီ ရေ
ကျနော်ဥပဒေတော့ သိပ် ထဲထဲဝင်ဝင် မသိပါ။
မသေ မချင်း ဆိုတဲ့ စကားလုဲံးနဲ့များ ချည်တုပ်ပြီး လုပ်ထည့်လိုက်သလားတော့ မသိဘူး
မ ဟေသီ ပြောသလို အများကြိုက် လုပ်ထည့်လိုက်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပြန်ပါတယ်
manawphyulay says: ဒါဆို ပဟေဠိ ညှိတဲ့ လေးပေါက်ပေါ့…. ထပ်ဆင့် ကွန်ကရက်ကျူရှင်းပါ လေးပေါက်ရေ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မနောရေ
ကွန်တဲ့ အတွက် ကျေးကျေး ပါ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .လေးပေါက်ရေ ခေတ်ကိုရေးတာ သိပ်ထိမိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဦးနှောက်ခြောက်နေရပါပြီ။ ဘာတွေဘယ်လို ဆက်ဖြစ်မယ် မသိတော့ပါဘု။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်တို့အားလုံးက တုံးအောက်က ဖားလို့ ပြားနေတာကြာပေါ့။
နန်းတော်ရှေ့ ဆရာ တင် သီချင်းထဲကလို
ကောင်းဘို့ရွယ်သော ခေတ်ကို အထူးသဖြင့်မျှော်မိတယ်ပေါ့ မပြုံးရေ